RAW vinteji oche - oche studio - ọtụtụ mara mma (na-erekwa otu n'otu) maka azụmahịa gị (3 na ngwaahịa) - Ezi Stuff Factory
Home / Oche / RAW akwa vinteji oche - oche studio - ezigbo mma (na-ere kwa otu) maka azụmahịa gị (3 na ngwaahịa)
RAW vinteji oche - oche studio - ọtụtụ mara mma (na-ere kwa otu) maka azụmahịa gị (3 na ngwaahịa)
Ọ dịghị mfe ịchọta ma anyị nwere ọnụ ọgụgụ dị mma nke oche ndị a. Ha sitere na ụlọ ọrụ mmepụta ihe na Brussels ma jee ozi ọtụtụ iri afọ. Ihe ndozi / oche / oche ndị a dị mma maka ụlọ ma ọ bụ azụmahịa gị. Jide n'aka na ị ga-asa ha oge ọzọ.
Ebe ndị a dị na 45 cm na 60 cm.
ỤLỌ: (mbido ala)
€ 45 maka oche
Enwere ike iji ngwa njem anyị gaa na € 1Km site na PC 2520 (Emblem). Tụkwasị na nke ahụ, ọ dịkwa ike na ọrụ pallet, mgbe ahụ, anyị na-atụkọta ha na pallet. Na-eziga pallet na Belgium na-abịa na 75, ndị fọdụrụ na Europe na-abịa gburugburu € 125 - € 175 kwa pallet. Na ọrụ pallet anyị enweghị ike ịma ụbọchị na oge nke nnyefe ... naanị izu a ga-enyefe ya. Na igbe nke DPD (rue 2 oche) nwere ike ịbụ € 15 kwa ngwugwu n'etiti Belgium na n'etiti € 15 - € 20 maka Europe.
Categorieën: Obere ocha, Oche Tag: oche oche
Vintage topper! Galvanitas S22 - 15 nọ na ngwaahịa € 100,00
Piece pụrụ iche - okpokoro Formica - 1 dị € 75,00
Etu oche Pagholz (12 na ngwaahịa) € 45,00
Mbido 10 Galvanitas S22 agbazigharị site na 70s (setịpụrụ ego maka iberibe 10) € 1000,00 € 850,00
Nnukwu oche na-ewu ewu na Norwegian
Galvanitas S16 retro topper! mpempe ikpeazụ € 121,00